Klever Utshintshiselwano Lusungula iNdawo yeMarike entsha ye-NFT [Beta] | Klever ezezimali
Klever Utshintshiselwano luQalisa indawo entsha yeMarike ye-NFT [Beta]
Klever U-2022 uqalisa nge-NFT bang. Idiphozithi, Ukurhoxiswa, Thengisa kwaye Thenga ii-NFTs Klever Tshintshiselana.
Ngojongano lomsebenzisi omtsha we-NFT, ungathengisa ngokukhawuleza okanye uthenge ii-NFTs zakho ngendlela enamandla kwaye Klever okusingqongileyo. Ukongeza kwi-Devikins, siya kuzisa ezinye iiqoqo ze-NFT zemarike kwiinyanga ezizayo.
Itekhnoloji entsha kufuneka ivavanywe kwimarike, ingxelo yomsebenzisi ihlolwe, kwaye uphuculo luya kwenziwa ngokukhawuleza nangendlela eguquguqukayo.
Esi sisiqalo samabali amaninzi empumelelo ye-NFT. Makhe siphinde sihlaziye into entsha kuyo Klever Shintsha:
Ngokudibanisa izipaji zabo kwi Klever Iqonga le-NFT, abasebenzisi banokudwelisa ii-NFT zabo ngokukhawuleza nangendlela esebenziseka lula. Kuya kubandakanya udibaniso lwe-web3 oluya kuvumela abasebenzisi ukuba baxhume ngokuthe ngqo Klever yiprojekti (iyeza kunekudala), Qhagamshela iWallet, Tronlink, Kunye nezinye ezininzi.
Kwii-blockchains ezahlukeneyo, ii-NFTs zinokudalwa, kodwa imirhumo ephezulu yegesi ibeka ingxaki kubo bobabini abadali kunye nabaqokeleli. Klever Utshintshiselwano luyawulungisa lo mba.
Klever Indawo yeMarike ye-NFT yindawo yentengiso esembindini, okuthetha ukuba ii-NFTs ziselugcinweni lwethu. Ngenxa yoko, imirhumo ye-blockchain ayisebenzi kuluhlu, ukubhida, okanye ukuthenga ii-NFTs. Umthengisi we-NFT kufuneka ahlawule kuphela umrhumo ophantsi kakhulu xa i-odolo igqityiwe, ngokungafaniyo ne-Ethereum kunye neeNdawo zeMarike ezinikezelweyo, ezihlawulisa iimali ezinkulu zerhasi zoluhlu, ukubhida, okanye ukudlulisa ii-NFTs ngeekontraki ezihlakaniphile.
Ukuqala nge-Devikins NFTs, i Klever Indawo yeMarike ye-NFT iya kukhutshelwa kwezinye ingqokelela ye-NFT kamva. Ii-NFTs azinakwenziwa kutshintshiselwano okanye zenziwe, njengoko sigxile ekulawuleni umxholo we-NFTs okhethwe liqela lethu.
Ngokwaziswa kwe Klever Indawo yeMarike ye-NFT ngaphakathi koTshintsho lwethu, Devikins NFT abaqokeleli bangadwelisa kwaye bafake ii-NFT zabo ngokukhawuleza nje ukuba baphile, okubavumela ukuba bafikelele kubaphulaphuli abaninzi ngentengiso ye-intanethi enabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezi-3.5 kwihlabathi liphela.
Ukuba unayo nayiphi na impendulo, izicelo, okanye iminqweno, sithumele impendulo Apha.
Akukho kalo 5 Iivoti: 17
Klever Tshintshiselana ngoluhlu Ibhokisi yeSanti (SAND)
Ukurhweba kuye kwaqhubeka Klever Utshintshiselwano ngoMeyi 19, 2022 ngo-8 PM (UTC).
Yintoni onokuyenza nge-AVA ngaphakathi Klever Isipaji?
Thenga, thumela, wamkele kwaye uhlawule i-AVA kwi Klever Isipaji.